मोदीको सरप्राइज ल्यान्डिङ, हेलिकप्टर भनेर विमानबाट ओर्लिए !
Posted: 2018-05-11 13:06:40
–भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एयर इण्डियाको क्षेत्रीय विमानमार्फत् जनकपुर आइपुगेका छन् ।
भारतीय वायु सेनाको हेलिकप्टरमा आउने भनिए पनि मोदी एयर इण्डियाको विमानबाटै जनकपुर आएका हुन् ।
मोदी निर्धा्रित समयभन्दा झण्डै आधा घण्टा ढिलो जनकपुर अवतरण गरेका हुन् । बिहान सवा १० बजे जनकपुर आउने भनिए पनि मोदी बिहान पौने ११ बजेको जनकपुर विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन् ।
सरप्राइज ल्यान्डिङ !
मोदी आएको विमान जनकपुर विमानस्थलमा केहीबेर रोकिएपछि मात्र मोदी ओर्लिएका थिए । त्यसअघि नै उनको भ्रमण दलका अन्य सदस्यहरू ओर्लिसकेका थिए ।
संरक्षित क्षेत्रमा जाने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका लागी शूल्कबृद्धि गरेकोमा टानको आपत्ति
Posted: 2018-10-16 12:33:39
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - सरकारले अन्नपूर्ण, मनास्लु र गौरीशंकर संरक्षित क्षेत्रमा जाने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकबाट लिने प्रवेश शूल्क बढाएको छ । स्वदेशी पर्यटकका लागि यसअघि निशुल्क प्रवेश दिँदै आएपनि सरकारले संरक्षित क्षेत्रमा जान शूल्कबृद्धि गरेको हो । संरक्षित क्षेत्रमा जान स्वदेशी पर्यटकले १ सय ...